आईपिएलका दुई सफल टिम , फाईनल खेल ! कडा टक्करको अपेक्षा – onlinekhelkhabar.com
आईपिएलका दुई सफल टिम , फाईनल खेल ! कडा टक्करको अपेक्षा
बैशाख २८ , अनलाईन खेलखबर ।। शुक्रबार राती सम्पन्न दोस्रो क्वाकिफायर खेलमा नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेको टिम दिल्ली क्यापिटल्सलाई ६ विकेटले पराजित गर्दै महेन्द्र सिह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई सुपर किग्स जारी १२ औँ सस्करणको ईण्डियन प्रिमियर लिग ( आईपिएल )को फाईनल प्रवेश गर्दै अब उपाधिका लागि मुम्बई ईन्डियन सँग प्रतिष्पर्दा गर्नेछ ।
आईपिएलका सफल मध्यका टिम मुम्बई र चेन्नई बिच हुने फाईनल खेल भोलि आईतबार राजीव गान्धी अन्तराष्टिय रङ्गशाला हैदराबादमा बेलुका नेपाली समय अनुसार पौने ८ बजेपछि हुनेछ । करिव ५५ हजार क्षमताको उक्त रङ्गशाला फाईनलमा भरिभराउँ हुनेछ । सबै टिकट बिक्रि भईसकेको छ ।
तर अहिले चेन्नईलाई मुम्बई बिरुद्द भने निकै असजिलो पक्कै हुनेछ । जारी प्रतियोगितामा ३ पटक भेट हुदाँ मुम्बईलेनै सबै खेल आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । लिगको पहिलो खेलमा मुम्बईले चेन्नईलाई ३७ रनले पराजित गरेको थियो । भने दोस्रो भेटमा पनि चेन्नईले ४६ रनले पराजित गरेको थियो ।
भोलि आईतबार पनि मुम्बईले चेन्नईमाथि चौथो पटक निराश पार्दै चौथो पटक उपाधि आफ्नो नाममा लेखाउने रणनीतिका साथ् मैदान उत्रिने छ । यता चेन्नईले बिगतको हारको बदला लिदै उ पनि चौथो पटक उपाधि आफ्नो नाममा लेखाउने पूर्ण रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिनेछ । यी दुई बिचको खेल कडा टक्कर हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ ।
Previous Postदिल्लीको फाईनल खेल्ने सपना अधुरै : चेन्नई पुग्यो फाईनलमा
Next Postसन्दिप भोलि स्वदेश फर्किदै